ပထမဆုံးအကြိမ် ရောင်းအားတက်သွားခဲ့ပေမယ့် အနာဂတ် မလှပသေးတဲ့ PC တွေရဲ့ ကံကြမ္မာ
16 Jul 2018 . 4:15 PM
Smartphone တွေ ခေတ်ကောင်းလာတဲ့ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း ကွန်ပျူတာဈေးကွက် တစ်ဖြည်းဖြည်း ထိုးဆင်းလာတာ သတိထားမိမှာပါ။ ဒါကလည်း စမတ်ဖုန်းတလုံးသုံးနေရတာက ပိုပြီး Portable ဆန်သလို အင်တာနက်ကြည့်တာ၊ ဂိမ်းကစားတာတွေကို ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးလို စွမ်းဆောင်လာနိုင်တာဖြစ်လို့ တော်ရုံ PC တစ်စုံဆင်ဖို့ မစဉ်းစားကြတော့လို့ပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း PC တင်ပို့မှု ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်း သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားခဲ့ပြီး ရောင်းအားတက်လာခဲ့တဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေကို သရဖူလွဲပြောင်းပေးခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရေးပါလာပြီလို့ မဆိုနိုင်သေးပေမယ့် PC တင်ပို့ရောင်းချမှု ၆ နှစ်တာကာလအတွင်း ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တိုးတက်လာခဲ့ပြီလို့ IDC နဲ့ Gartner လို Market သုတေသနပညာရှင်တို့က ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဒီလို PC တွေ ရောင်းအားကောင်းလာခဲ့တာကို Windows ကွန်ပျူတာတမျိုးထဲရဲ့ ရောင်းအားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမဟုတ်သလို ARM Processor သုံးထားတဲ့ Chrombook တွေက တစ်ဖက်တစ်လမ်းကပါဝင်နေခဲ့ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ IDC အဆိုအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလမှာ PC ရောင်းအား ၂.၇ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများလာခဲ့သလို Gartner အနေနဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေရဲ့ ရောင်းအားထက် ၁.၄ ရာခိုင်နှုန်း ပိုတိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
အခုလို Researcher နှစ်ယောက် လေ့လာထားချက်မှာ Windows PC တွေ မဟုတ်တဲ့ Chromebook နဲ့ Apple လို ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ ရောင်းအားက Android OS သုံး စမတ်ဖုန်းတွေနဲ့ အပြိုင်ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်လည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း တင်ပို့ရောင်းချနေတဲ့ PC ဈေးကွက်မှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “Windows 10” OS အသုံးပြုထားတဲ့ တစ်ကိုယ်ရည်သုံး PC တွေကတော့ အဓိကနေရာက ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး Surface Pro လို Microsoft ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဟာ Business PC အနေနဲ့ ထိပ်ဆုံးက ရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ PC ရောင်းအားကောင်းလာခဲ့တာ စီးပွားရေးအရ ဝယ်လိုအားများနေခဲ့တာဖြစ်သလို Gartner ရဲ့ Marketing Analyst ဖြစ်သူ Mikako Kitagawa က “အခုလို PC တင်ပို့ရောင်းချမှု အားကောင်းနေတာ နောက် ၂ နှစ်အတွင်း Windows 10 ခေတ်ကုန်သွားရင် အားပျော့လာနိုင်တယ်လို့” ပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို ရောင်းအားကောင်းနေတာဟာ Windows 10 OS ရဲ့ အရှိန်အဟုန်ကြောင့်လည်း ပါဝင်နေခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးသပ်ထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် PC ဈေးကွက်ကို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်နေတဲ့ HP ၊ Lenovo ၊ Dell ၊ Apple နဲ့ Acer တို့လို PC ထုတ်လုပ်သူတွေ ယှဉ်ပြိုင်မှုအားကောင်းနေဆဲကာလမှာ ရောင်းအားကောင်းနေတာဖြစ်ပေမယ့်လည်း မသေချာ မရေရာတဲ့ သဘောဆောင်နေတာဖြစ်လို့ လာမယ့်နှစ်အတွင်း PC ဈေးကွက် အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိမလဲဆိုတာ မသုံးသပ်နိုင်သေးပါဘူး။
ပထမဆုံးအကွိမျ ရောငျးအားတကျသှားခဲ့ပမေယျ့ အနာဂတျ မလှပသေးတဲ့ PC တှရေဲ့ ကံကွမ်မာ
Smartphone တှေ ခတျေကောငျးလာတဲ့ ၂၀၁၀ နောကျပိုငျး ကှနျပြူတာစြေးကှကျ တဈဖွညျးဖွညျး ထိုးဆငျးလာတာ သတိထားမိမှာပါ။ ဒါကလညျး စမတျဖုနျးတလုံးသုံးနရေတာက ပိုပွီး Portable ဆနျသလို အငျတာနကျကွညျ့တာ၊ ဂိမျးကစားတာတှကေို ကှနျပြူတာ တဈလုံးလို စှမျးဆောငျလာနိုငျတာဖွဈလို့ တျောရုံ PC တဈစုံဆငျဖို့ မစဥျးစားကွတော့လို့ပါ။
အဲ့ဒါကွောငျ့ ကမ်ဘာတဈဝနျး PC တငျပို့မှု ၂၀၁၂ နောကျပိုငျး သိသိသာသာ ကဆြငျးသှားခဲ့ပွီး ရောငျးအားတကျလာခဲ့တဲ့ စမတျဖုနျးတှကေို သရဖူလှဲပွောငျးပေးခဲ့ရတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ ကှနျပြူတာတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍ အရေးပါလာပွီလို့ မဆိုနိုငျသေးပမေယျ့ PC တငျပို့ရောငျးခမြှု ၆ နှဈတာကာလအတှငျး ပထမဦးဆုံးအကွိမျ တိုးတကျလာခဲ့ပွီလို့ IDC နဲ့ Gartner လို Market သုတသေနပညာရှငျတို့က ကွညောလိုကျပါပွီ။ ဒီလို PC တှေ ရောငျးအားကောငျးလာခဲ့တာကို Windows ကှနျပြူတာတမြိုးထဲရဲ့ ရောငျးအားနဲ့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာမဟုတျသလို ARM Processor သုံးထားတဲ့ Chrombook တှကေ တဈဖကျတဈလမျးကပါဝငျနခေဲ့ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ IDC အဆိုအရ ၂၀၁၈ ခုနှဈ အစောပိုငျးကာလမှာ PC ရောငျးအား ၂.၇ ရာခိုငျနှုနျး ပိုမြားလာခဲ့သလို Gartner အနနေဲ့လညျး ပွီးခဲ့တဲ့နှဈတှရေဲ့ ရောငျးအားထကျ ၁.၄ ရာခိုငျနှုနျး ပိုတိုးတကျလာခဲ့တယျလို့ ပွောကွားထားပါတယျ။
အခုလို Researcher နှဈယောကျ လလေ့ာထားခကျြမှာ Windows PC တှေ မဟုတျတဲ့ Chromebook နဲ့ Apple လို ကှနျပြူတာတှရေဲ့ ရောငျးအားက Android OS သုံး စမတျဖုနျးတှနေဲ့ အပွိုငျဖွဈနခေဲ့တဲ့အတှကျလညျး နှဈစဥျနှဈတိုငျး တငျပို့ရောငျးခနြတေဲ့ PC စြေးကှကျမှာ ထညျ့သှငျးစဥျးစားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ “Windows 10” OS အသုံးပွုထားတဲ့ တဈကိုယျရညျသုံး PC တှကေတော့ အဓိကနရောက ပါဝငျနခေဲ့တာဖွဈပွီး Surface Pro လို Microsoft ထုတျကုနျပစ်စညျးဟာ Business PC အနနေဲ့ ထိပျဆုံးက ရပျတညျနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ PC ရောငျးအားကောငျးလာခဲ့တာ စီးပှားရေးအရ ဝယျလိုအားမြားနခေဲ့တာဖွဈသလို Gartner ရဲ့ Marketing Analyst ဖွဈသူ Mikako Kitagawa က “အခုလို PC တငျပို့ရောငျးခမြှု အားကောငျးနတော နောကျ ၂ နှဈအတှငျး Windows 10 ခတျေကုနျသှားရငျ အားပြော့လာနိုငျတယျလို့” ပွောဆိုထားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုလို ရောငျးအားကောငျးနတောဟာ Windows 10 OS ရဲ့ အရှိနျအဟုနျကွောငျ့လညျး ပါဝငျနခေဲ့တာ ဖွဈတယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှေ သုံးသပျထားပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ PC စြေးကှကျကို လှမျးမိုးခြုပျကိုငျနတေဲ့ HP ၊ Lenovo ၊ Dell ၊ Apple နဲ့ Acer တို့လို PC ထုတျလုပျသူတှေ ယှဥျပွိုငျမှုအားကောငျးနဆေဲကာလမှာ ရောငျးအားကောငျးနတောဖွဈပမေယျ့လညျး မသခြော မရရောတဲ့ သဘောဆောငျနတောဖွဈလို့ လာမယျ့နှဈအတှငျး PC စြေးကှကျ အခွအေနေ ဘယျလို ရှိမလဲဆိုတာ မသုံးသပျနိုငျသေးပါဘူး။
by Kyaw Soe Aung . 13 hours ago
10GB RAM နဲ့ 30W Warp Charge ပါဝင်လာတဲ့ OnePlus 6T McLaren Edition